Mutengo uye matipi ekumisikidza PrestaShop online chitoro | ECommerce nhau
PrestaShop online chitoro mutengo
Kana iwe wafunga kugadzirisa bhizinesi rako uye kuongorora mikana inopihwa neInternet, a online store Inofanira kunge iri yako yekutanga kukoshesa. Chinhu chekutanga chekufunga nezvacho ndeichi mutengo webhizinesi reInternet, kunyanya iyo Ecommerce chikuva mutengo kushandisa
Mupfungwa iyi, tinoda kutaura newe nezve mutengo we PrestaShop online chitoro, sezvo ichi chiri chimwe chezvitoro zvinozivikanwa pamhepo nhasi. Kune vazhinji vanamuzvinabhizimusi vane chinangwa chekugadzira iyo chitoro chepamhepo chebhizinesi rako, Iyi software ichaita kuti zvive nyore kwauri kuti utore huwandu hwakawanda hwezviitiko izvo zvaisazogoneka neimwe nzira.
1 Kugadzikana kwechitoro chepamhepo
2 Tenga duraini, hire a web hosting
3 Pamhepo Point yekutengesa terminal
4 Mutengo wega wega dhizaini yako yepamhepo nePrestaShop
5 Ma module ekuvandudza chitoro
6 PrestaShop Yakagadzirira mutengo
7 Kuwedzera mutengo wechitoro chepamhepo
Kugadzikana kwechitoro chepamhepo
Izvo zvakasiyana kutengesa zvigadzirwa zvako muchitoro chemuviri pane kuzviita kuburikidza ne online chitoro paInternet. Kuti uone kana bhizinesi rako richava naro kubudirira pawebhu, zvinodikanwa kuti uite a kuongorora kwekugona, umo masangano nevevanhu vanofanirwa kutariswa, chidzidzo chepamusika chakagadziriswa uye mhedzisiro yakaongororwa.
Zvese izvi zvinosanganisira mutengo, uyo unofanirwa kuwedzerwa kune imwe mari yekuve nechitoro chepamhepo uye chatichataura nezvacho pazasi.
Tenga duraini, hire a web hosting
Imwe yemitengo mikuru inosanganisirwa ne PrestaShop online chitoro mutengo ndizvo chaizvo kutenga duraini. Sezvo iwe uchinyatso kuziva, iyo domasi izita rakasarudzika iro rakapihwa kune peji rewebhu uye iro rinozivisa uye rinoita kuti zvive nyore kuziva imwe IP kero paInternet.
Pamwe nekutenga zita rezita rako online store, zvinodawo kubvumirana nebasa webhu kubata, uko chaizvo saiti ichaitirwa.
Parizvino unogona kuwana makambani anotengesa domain names kwepakati pe € 10 kusvika € 25 pagore, nepo webhu inomiririra sevhisi inogona kubhadharwa kubva ku € 2,60 pamwedzi
Pamhepo Point yekutengesa terminal
Saka kuti iwe chitoro chepamhepo nePrestaShop inoshanda nemazvo, iwe unofanirwa kupa sarudzo kuti vatengi vako vakwanise kubhadhara nekiredhiti kana kiredhiti kadhi.
Naizvozvo, zvakafanira zvakare kuwedzera chinongedzo kumitengo online yekutengesa iyo inopa yakachengeteka nzira yekubhadhara.
Mitengo inosiyana zvichienderana nedivi rega, zvisinei chinhu chakajairika ndechekuti iwe unofanirwa kuisa mari kutenderera € 20 pamwedzi yekuchengetedza.
Mutengo wega wega dhizaini yako yepamhepo nePrestaShop
Imwe yeakakosha ekugadzira iyo chitoro chepamhepo nePrestaShop zvine chekuita nenyaya yekuti iwe unogona kuwana yakawanda ye Themes kana Matemplate ekugadzira yako saiti nenzira yaunofarira zvakanyanya.
Iwe unogona kuwana PrestaShop matemplate echimwe chakanangana theme ye € 59 kana inosvika ku € 89.
También is not available akawanda ma module kuwedzera kushanda yewebsite yako muzvinhu zvakaita sekuwedzera traffic, kuwana yakawanda shanduko, kuvandudza kufamba, kutumira uye logistics, manejimendi, kubhadhara, nezvimwe.
Ma module ekuvandudza chitoro
Chimwe chiitiko ku simbisa kubva kuPrestaShop ndeyekuti ine anopfuura mamodule 3.000 anopa chitoro chako chepamhepo zvakanyanya mashandiro, nenzira yekuti iwe unogona kugadzirisa akawanda acho, pamwe nekuvandudza akasiyana maficha, kusanganisira kuvimbika kwevatengi.
Imwe yeaya ma module ane mutengo wakasiyana zvichienderana neshumiro uye mashandiro avanopa. Chero zvazvingaitika, chinhu chakakosha kuziva ndechekuti PrestaShop ma module Izvo zvakakosha kuti uwedzere mashandiro echitoro chako chepamhepo uye kusimudzira kukura kwayo.
Sezvatatotaura, pane zvakawanda zve PrestaShop module inowanikwa, mamwe ekurumbidzwa ndeaya anotevera:
SEO Nyanzvi module. Iyo module inoitirwa kuti zvive nyore kune vako vangangove vatengi kuti vawane yako online chitoro zviri nyore kuburikidza nekutsvaga injini uye magariro mapuratifomu. Mutengo weiyi PrestaShop module inenge € 181.
Email kushambadzira module. Iyo yakakosha module nekuti nayo iwe unogona kuwedzera iyo shanduko mitengo yeEcommerce yako uye panguva imwechete iyo ichakubatsira iwe kuchengetedza vatengi. Iyo module iyo iwe yaunogona kukurudzira vatengi vako kuti vadzokere kuchitoro chako zvakare, iwe unogona kunyange kuitisa iyo yekushambadzira uye kushambadzira mishandirapamwe
Akasiya mota module. Mune ino kesi, iri inobatsira module nekuti nguva dzese vatengi vako pavanosiya ngoro yekutenga, ivo vanogashira imwe kana kupfuura zviyeuchidzo kuburikidza neyakagadzirirwa email. Iyi module ichakubatsira iwe kuvandudza mwero wekushandurwa muchitoro chako chepamhepo, unogona kuushandisa kupa zvikwereti pamaemail zvinokurudzira vatengi kupedzisa odha yavo. Mutengo weiyi module ungangoita € 145.
PrestaShop Yakagadzirira mutengo
In the PrestaShop Yakagadzirira nhau Iyo ndeimwe yeakareruka uye akapusa ecommerce mhinduro dzekushandisa zvine chekuita nehutariri uye zvakare hazvidi zvemberi zvehunyanzvi ruzivo.
Uyu nyowani yakagadziridzwa uye yakavandudzwa vhezheni yePrestaShop Inotarisirwa kumabhizinesi madiki, maFreeLancer, mahara kana maSME, kunyangwe zvaro rakaringana kune chero munhu anoda kugadzira bhizinesi nekutengesa kwepamhepo.
Parizvino, zvirongwa zvitatu chete zviripo zvinogona kuwanikwa: Nyeredzi, Pro uye Premium.
Unogona kubvumidza chirongwa cheNyeredzi che € 19,90 pamwedzi pachiyero chisina mutero uye pamutengo uyu unogona kuwana nhamba isingaverengeki yezvigadzirwa, nhamba isingaverengeki yemaakaundi akamboshandiswa, nhamba isingagumi yemifananidzo, uyezve iwe unogona kuwana zvinopfuura mazana matanhatu zvinoshanda. , mukana wekutumira kunze data, zvigadzirwa zvinogadziriswa, kunyangwe iyi vhezheni yePrestaShop inoenderana nepuratifomu yefoni.
PrestaShop Yakagadzirira inopihwawo nebhurogu, yemahara tsamba yekunyorera ine inosvika zviuru gumi nezviviri zvekutumirwa pamwedzi, rutsigiro rusingagumi, rutsigiro rwekubhadhara nekadhi kana kuburikidza nePayPal account, inotumirwa kuburikidza nevatakuri vakuru, kuitisa paGoogle Cloud Platform, inotovawo neiyo SSL chengetedzo chitupa. Ehezve iyi software yekugadzira online zvitoro ndeye multilanguage uye multicurrency
Zvakakosha kutaura kuti izvozvi, PrestaShop Yakagadzirira Inogona kushandiswa mahara kwemazuva gumi nemashanu pasina chero rudzi rwekuzvipira uye usinga fanirwe kupa yako kiredhiti kadhi ruzivo. Kana iyo yekuedzwa yapera, iwe unenge uine mukana wekubata chimwe chezvirongwa zvataurwa kare uye kuvimbisa kuti yako online chitoro chinoramba chichiita mushe uye nemhedzisiro.
Kuwedzera mutengo wechitoro chepamhepo
La kutenga kwePrestaShop software Haisiyo yega mutengo unobatana neako online chitoro. Pamwe chete nezvataurwa pamusoro, zvakare zvakakosha kuti utarise zvimwe zvekushandisa izvo zvinozovimbisa zvirinani bhizinesi mhedzisiro. Pakati pavo tinoratidzira zvinotevera:
Yekutsvaga injini yekuvandudza (SEO). Kana iwe uchida kuva nevashanyi muchitoro chako chepamhepo uye kuti vashanyi ivavo vatenge zvigadzirwa zvako kana masevhisi, zvakakosha kuti uite mushandirapamwe wekutsvaga injini yeEcommerce yako. Kune huwandu hukuru hweSEO masevhisi uye vamiririri ayo anowanzo kubhadharisa pakati pe € 300 kusvika € 500 pamwedzi.
Tsvaga Injini Yekushambadzira (SEM). Ichowo chimwe chemubhadharo chaunofanira kuwedzera kune yako prestaShop online chitoro uye icho chinoenderana nekumaka zvekare uye akasiyana mishambadziro yekushambadzira inoitwa neGoogle Adwords. Zvese izvi zvinogona kusvika pamutengo wepakati pe € 300 kusvika € 5.000 pamwedzi.
PrestaShop hapana mubvunzo chimwe chezvishandiso zvakanakisa kugadzira online storesNekudaro, haisiriyo wega mutengo wauchazotora kana iwe uchinyatsoda rako repamhepo bhizinesi kuti ribudirire uye kukupa iwe yaunoda mhedzisiro.
Iwe unofanirwa kuziva kuti kune zvimwe zvakabatana mari izvo zvakaenzana zvakakosha kuchitoro chako chepamhepo, kusanganisira iyo zita rezita, Kunyangwe paine sarudzo dzemahara, hazvisi nyore, kunyanya kana izvo zvauri kutsvaga ndezvekuwedzera mhando yako. Izvo zvinodawo kuti iwe uwane unoshanda uye hwakavimbika webhu saiti yekubatira kuitira kuti yako online chitoro igare ichigara online.
Ehezve isu hatifanire kukanganwa nezve iyo PrestaShop module, iyo ichakubatsira iwe kuvandudza mashandiro echitoro chako chepamhepo mune zvakawanda zvinhu. Iwe zvakare unofanirwa kusanganisa dhizaini nekutenga matemplate, ayo nenzira anogona kuwanikwa mune akasiyana siyana ezvikamu, pamwe neizvo zvambotaurwa SEO uye SEM.
Tichifunga zvese zviri pamusoro, mutengo weiyo PrestaShop online chitoro Inogona kutangira kubva ku € 1.500 kusvika ku € 3.000, kunyange hazvo nhamba iyi inogona kusiyana uye ichiwedzera zvichienderana nezvinodiwa muchitoro chako chepamhepo.
Ngatisakanganwe kuti nyaya yekugadzirisa inofanirwa kutarisirwawo, iyo inofanirwa kuitwa nguva nenguva kuona kuti chitoro chako chepamhepo chinogara chinoshanda uye chinowanikwa kune vese vatengi vako, zvisinei nemidziyo yavanoshandisa.
Chero zvazvingaitika tinofunga izvozvo mutengo wechitoro chepamhepo nePrestaShop zvinonzwisisika tichitarisa ese maficha uye mashandiro ayo aanotipa.
Kubva pane catalog manejimendi iyo inokutendera iwe kubata runyorwa runyowani rwezvigadzirwa zvako, kuratidza zvese zvaunotengesa munzira yakasarudzika uye nekupa vatengi vako dzakasiyana siyana sarudzo kuti vakwanise kuona zvigadzirwa zvavari kutsvaga.
Yakazara nzira kuchinyorwa: ECommerce nhau » Zvechokwadi uye nhau » StartUps uye vanamuzvinabhizimusi » PrestaShop online chitoro mutengo
Maitiro ekupinza zvigadzirwa kuPrestaShop